Izixhobo zokuvelisa umasifundisane -Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Thina Jera ifayibha uyilo nokuvunda yethu, ekwenziweni sokubumba kunye nomngundo processing workshop.
Ukubumba yibhloko efihliweyo ezele ulwelo okanye izinto ezinokucocwa ezinje ngeplastiki, iglasi, isinyithi okanye izinto zodaka eziluhlaza. Ukubumba kungumlingani weqonga. Njengomvelisi, kulula ukuba neeworkshop zabo zokubumba, ukuze balungise kwaye bahlanganise umngundo wentsimbi ngokukhawuleza kwaye emva koko bancede imigca yemveliso ngokufanelekileyo.
Kwiworkshop yokubumba, sihlala senza icandelo lesikhunta kwiimveliso:
-Ukushicilela ukwenza iimveliso
-Aluminiyam die ekubunjweni iimveliso
-Zinc die iimveliso ekubunjweni
Ucingo -Helical bamba ukuqonda
Ngale masifundisane sokubumba, i-jera iyakwazi ukuphanda kunye nokuphuhlisa iimveliso ezintsha okanye ukuvelisa uluhlu lwemveliso ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi. Kwaye umzi-mveliso wethu unokukhuphisana ngakumbi, kwaye ube nakho ukubonelela abathengi bethu ngexabiso lokhuphiswano kunye neemveliso ezisemgangathweni ophezulu.
Injongo yethu kukuvelisa kunye nokubonelela ngemveliso ebanzi nethembekileyo kubathengi bethu kulwakhiwo lothungelwano lonxibelelwano kunye neenkqubo zokuhambisa amandla. Senza zonke iimveliso ezinxulumene noko kubaxhasi bethu kulwakhiwo lothungelwano lonxibelelwano kunye neenkqubo zokuhambisa amandla. Ukuba uneemfuno ezinxulumene neemveliso, zive ukhululekile uku-imeyile okanye usitsalele umnxeba.